Maxaa Ku Cusub Hargeysa?	Monday, 25 July 2011 19:49	Maxaa Ku Cusub Hargeysa?
Maxaa ku cusub Hargeysa! waxa soo badanayay sanadii u danbeeyay goobaha iyo meheradaha ganacsiga ee haweenku siga gaarka ah u maamulaan, waxa loo yaqaano kofeerada dumarka ee lagu qurxiyo Haweenka, sida dhisida Aroosyada, xafladaha iyo munaasibadaha kale ee caweysyada oo lagu dhiso, ama lagu qurxiyo haweenka doonaya inay habeenkaa ka qayb galaan xafladahaa.
Hase yeeshee Maqribi Beauty Salon oo ku yaala magaalada Hargeysa, wuxuu ka duwan yahay goobahaa hore u jiray, waxaana yaala qalab casri ah oo laga soo waariday debeda. Sida qaybta qolka Steam Room, kaasoo uu yaal qalab lagu magcaabo Maroco Bath oo marka uu galo qofku lagu furayo Uumi, taas oo suurta gelinaysa inuu qalabkaasi si fiican u nadiifiyo jidhka qofka, isagoo qofku dareemaya debecsanaan iyo fudayd aanu hore u arag.
Maqribi marka laga yimaado qalabkaa iyo adeegaa waxa lagu sameeyaa dhisida Aroosyada, waxyaabaha aan looga maarmin Aroosyada, ama caruusadaha. Sida noocyada kala duwan ee dharka inta badan loo xidho habeenkaa, xafladaha iyo haweenka doonaya inay ka qayb galaan habeenkaa munaasibad. Sidoo kale qurxinta dumarka iyo dawaynta dumurka ay waxyeelada gaadhsiiyeen maqaarka jidhkooda dawooyinka ay hore u isticmaaleen, ama kuwa timihu ka daadanayaan oo loogu diyaariyay waxyaabo usoo celinaya timaha oo xanaanaynaya, ama tayaynaya timahooda.
Hadaba si aad u ogaato Maqribi Beauty Salon oo ku yaala duleedka saldhiga koodbuur ee magaalada Hargeysa. Maqribi waxa kuugu diyaara shaqaale xirfad iyo waayo aragnimo u leh adeegada qurxinta haweenka, waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee saldhiga Koodbuur, dhawr talaabo u soco wadada laamiga ee dhaadhaca. Kadibna eeg dhinaca Koonfur, waxaad arkaysaa Boodhka Maqribi Beauty Salon.oo kaa qabanaya dhinaca jihada Koonfureed ee wadada Laamiga ah.